လှပလွန်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကိုပေါ်လွင်အောင် စတိုင်အပြည့်နဲ့ အလှပြလိုက်တဲ့ Mဆိုင်းလု – Shwe Ba
လှပလွန်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကိုပေါ်လွင်အောင် စတိုင်အပြည့်နဲ့ အလှပြလိုက်တဲ့ Mဆိုင်းလု
Super မော်ဒယ် လ် တစ်ယောက် ဖြစ် တဲ့ Mဆိုင်း လု တစ်ယောက် သူမ ရဲ့ ရင်ခုန်ဖွယ်ရာ ပုံရိပ် အလန်း​ တွေ ကို လူ မှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ ပေါ်မှာ ဝေ မျှ လိုက် ပြန် ပါ ပြီ..။ ကျော့ ရှင်း တဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်လေး က တကယ် ကို ကြွေချင် စရာ ပါ ပဲ နော်..။ လှပ လွန်း တဲ့ မျက်နှာ လေး က မြင် လိုက် တိုင်း မှာ ချစ်စိတ် တွေ ကို ဖြစ်ပေါ်စေ တာ ဖြစ် ပြီး က ချင် တိုင်း ရင်း သူ လေး ဖြစ် တာ ကြောင့် ဆွဲဆောင် မှု အပြည့် ရှိ တဲ့ အလှ တရားဟာ ပုရိသ ပရိသတ် တွေ ကို ဖမ်းစား နေတာ ပါ…။
ဆိုင်း လု က ဘယ်လို ဖက်ရှင် မျိုး မဆို သူမနဲ့ လိုက်ဖက် လွန်းနေ ပြီး အရမ်းကို ကြည့်ကောင်း လွန်း နေတာ လည်း ပရိသတ် တွေ အသိ ပဲ​​ဖြစ် ပါ တယ်..။ မကြာ ခဏဆို သ လို အလန်းစား ဖက်ရှင် တွေ နဲ့ အလှ ပဆုံး ပုံရိပ် လေး တွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် ထက် မှာ ဝေမျှလေ့ ရှိတဲ့ ဆိုင်းလု က ယနေ့ မှာ ဆို ရင်လည်း ညအိပ် ဝတ်စုံ လေး နဲ့ မိမိုက် လွန်း နေ တာ ပါ..။
ဆိုင်း လု က ” မနက်ခင်း မှာ နိုးလာ ခဲ့ အရင် ဆုံး မင်းကို လွမ်းပါ တယ် ” ဆို တဲ့ စာ သားလေး နဲ့ အတူ အလန်း စား ၀တ်စုံလေး နဲ့ ရင်ဖို ချင် စရာ ကောင်းလွန်း နေတာ ဖြစ် ပြီး ကြည့်မိသူ တိုင်း ကို အချစ် ပိုစေပြန် တာ ပါ..။ နှစ်ခါ ပြန်ကြည့် ရ လောက် အောင် ဆွဲဆောင် မှု ပိုလွန်းနေ တဲ့ ဆိုင်းလု ရဲ့ ပုံ လေး တွေ ကို ပြန်လည် တင်ဆက် ပေး လိုက် ပါ တယ် နော် … .
Super ေမာ္ဒယ္ လ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ တဲ့ Mဆိုင္း လု တစ္ေယာက္ သူမ ရဲ့ ရင္ခုန္ဖြယ္ရာ ပုံရိပ္ အလန္း​ ေတြ ကို လူ မႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ ေပၚမွာ ေဝ မၽွ လိုက္ ျပန္ ပါ ၿပီ..။ ေက်ာ့ ရွင္း တဲ့ ခႏၶာ ကိုယ္ေလး က တကယ္ ကို ေႂကြခ်င္ စရာ ပါ ပဲ ေနာ္..။ လွပ လြန္း တဲ့ မ်က္ႏွာ ေလး က ျမင္ လိုက္ တိုင္း မွာ ခ်စ္စိတ္ ေတြ ကို ျဖစ္ေပၚေစ တာ ျဖစ္ ၿပီး က ခ်င္ တိုင္း ရင္း သူ ေလး ျဖစ္ တာ ေၾကာင့္ ဆြဲေဆာင္ မႈ အျပည့္ ရွိ တဲ့ အလွ တရားဟာ ပုရိသ ပရိသတ္ ေတြ ကို ဖမ္းစား ေနတာ ပါ…။
ဆိုင္း လု က ဘယ္လို ဖက္ရွင္ မ်ိဳး မဆို သူမနဲ႔ လိုက္ဖက္ လြန္းေန ၿပီး အရမ္းကို ၾကည့္ေကာင္း လြန္း ေနတာ လည္း ပရိသတ္ ေတြ အသိ ပဲ​​ျဖစ္ ပါ တယ္..။ မၾကာ ခဏဆို သ လို အလန္းစား ဖက္ရွင္ ေတြ နဲ႔ အလွ ပဆုံး ပုံရိပ္ ေလး ေတြ ကို လူမႈ ကြန္ယက္ ထက္ မွာ ေဝမၽွေလ့ ရွိတဲ့ ဆိုင္းလု က ယေန႔ မွာ ဆို ရင္လည္း ညအိပ္ ဝတ္စုံ ေလး နဲ႔ မိမိုက္ လြန္း ေန တာ ပါ..။
ဆိုင္း လု က ” မနက္ခင္း မွာ နိုးလာ ခဲ့ အရင္ ဆုံး မင္းကို လြမ္းပါ တယ္ ” ဆို တဲ့ စာ သားေလး နဲ႔ အတူ အလန္း စား ၀တ္စုံေလး နဲ႔ ရင္ဖို ခ်င္ စရာ ေကာင္းလြန္း ေနတာ ျဖစ္ ၿပီး ၾကည့္မိသူ တိုင္း ကို အခ်စ္ ပိုေစျပန္ တာ ပါ..။ ႏွစ္ခါ ျပန္ၾကည့္ ရ ေလာက္ ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ မႈ ပိုလြန္းေန တဲ့ ဆိုင္းလု ရဲ့ ပုံ ေလး ေတြ ကို ျပန္လည္ တင္ဆက္ ေပး လိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post အချိုးကျလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကြောင့် အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ စွဲမက်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့ စတယ်လ်လာရဲ့ အလန်း စား ပုံလေးများ
Next post ငြိမ်နေတာကြာလို့ အမျိုးသားထုကြီးကို ဆက်ဆီကျကျနဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေချပြလိုက် တဲ့ မော်ဒယ်လ်မျက်ဝန်းရဲ့ ပုံအလှလေးများ